अष्ट्रेलियाविरुद्ध ५ विकेट लिने मोहम्मद अमिर को हुन् ?
Thu, Jul 2, 2020 at 9:46pm
साम्राज्ञीविरुद्ध भुवन केसीले दिए कलाकार संघमा उजुरी #आहा खबर# प्रधानमन्त्री ओलीले भेटे ‘इनफ इज इनफ’का अभियान्तालाई #आहा खबर# 'महत्वपूर्ण विधेयकबारे टुंगोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद' #आहा खबर# नेकपा विवादः एकता रक्षाका लागि प्रयास #आहा खबर# पार्टी एकताको भावना विपरीत नजान नेतृत्वलाई नेकपा पाल्पाको आग्रह #आहा खबर# काठमाडौं उपत्यकामा थप ३२ जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि #आहा खबर# बिहीबार थप ४७३ जनामा देखियो कोरोना सङ्क्रमण #आहा खबर# नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री नै नआएपछि नेताहरू छलफलमा #आहा खबर# कोरोना संक्रमणबाट डेढ महिने शिशुको मृत्यु #आहा खबर# ७ सयलृ घट्याे सुनकाे भाउ, कति पुग्याे ताेलाकाे ? #आहा खबर# सामसङले नेपाली बजारमा घटायाे स्मार्टफोनको मूल्य #आहा खबर# मन्त्रिपरिषद‍् बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओली पुगे राष्ट्रपति निवास #आहा खबर# सरकारलाई जिम्मेवार बन्‍न राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको आह्‍वान #आहा खबर# बारामा चट्याङ लागेर धान रोपीरहेका चार महिलाको मृत्यु #आहा खबर# ओली निकटका नेताहरु प्रचण्डसँग छलफल गर्न खुमलटारमा #आहा खबर#
बुधबार, २९ जेष्ठ २०७६,	आहाखबर	5.98K
एजेन्सी, २९ जेठ
आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तगर्त १७ औं खेलमा अष्ट्रेलिया र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
पाँच पटकको च्याम्पियन अष्ट्रेलिया ३ सय ७ रनमा अलआउट भएको छ । विशाल लक्ष्य जोडेको अष्ट्रेलियाविरुद्ध पाकिस्तानका एक बलर चम्के । जसले कप्तान आरोन फिन्चसहित पाँच ब्याटसम्यानलाई पवेलियन फर्काए । उनी हुन् २७ वर्षीय मोहम्मद अमिर ।
जो एकदिवसीय क्रिकेट करिअरमा ५४ औं खेल खेलिरहेका छन् । कन्ट्री ग्राउण्डमा अमिरले अष्ट्रेलियाका कप्तान आरोन फिन्चलगायत उसमान ख्वाजा, सान मर्स, एलेक्स केरी, मिचेल स्टार्कलाई पभेलियन फर्काए ।
पहिलो विकेटका रुपमा कप्तान फिन्चलाई आउट गर्दै उनले पाकिस्तानलाई ठूलो सफलता दिलाएका थिए । मर्सलाई २३ रनमा क्याच गरेका उनले ख्वाजालाई १८ रनमा वाहब रियाजमार्फत क्याच गराएका थिए ।
एलेक्स केरीलाई २० रनमा एलबीडब्लू धरापमा पारेका अमिरले मिचेल स्टार्कलाई ३ रनमा आउट गरे । आजको पाँच विकेटसँगै आमिरले एकदिवसीय क्रिकेट करिअरमा ७० विकेट लिएका छन् । उनले २००९ मा श्रीलंकाविरुद्ध खेल्दै एकदिवसीय क्रिकेट सुरू गरेका थिए ।